सरकारले फेरि धोका दिएको भन्दै डा. केसीले शुरु गरे १६ औं अनशन  BikashNews
सरकारले फेरि धोका दिएको भन्दै डा. केसीले शुरु गरे १६ औं अनशन
२०७५ पुष २५ गते १७:१८ विकासन्युज
काठमाडौं। सरकारले फेरि धोका दिएको भन्दै डा. केसिले आफ्नो १६ औं अनसन सुरु गरेका छन्।
सरकारसँग गरेको सहमति विपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक पारित गरेपछि डा. केसिले अनसन सुरु गरेका हुन्।
डा केसीले इलामस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालयमा बुधबार साँझ ५ बजे अनसन सुरु गरेका हुन्।
४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।